Nduku Uche ọgụgụ isi - echiche maka ụlọ na ubi
10.05.2014 Bipụtara: Senti Art
Ngwa ngwa, dị mfe, na-atọ ụtọ!, Echiche Homelọ, Ntụziaka
Nduku bu otu onyinye onyinye nyere uwa ohuru natara n'aka ndi bi na Andes n'oge ochie. N'ala nna ha, ọtụtụ ụdị, ụdị, agba na ihe ụtọ nke ga-eju ndị ọbịa ahụ nọchiri anya mkpụrụ osisi a. Ndị Spain kpọtara ha na Europe. Na-etolite na nzuzo, onyinye eke a na-ajuju dị elu na carbohydrates nwekwara protein, mineral (ọkachasị potassium) na vitamin, gụnyere vitamin C. Taa, nduku emeriela ụwa, na ọnụnọ ha na kichin ọ bụla bụ ihe achọrọ. Ha na-adị ngwa ma dịkwa mfe ịkwadebe. Ha na-esi nri dị ụtọ dị ka nke e ghere eghe ma ọ bụ ghere eghe. Agbanyeghị, echiche ndị dị ugbu a bụ maka nduku nri. N'ebe a, anyị ga-akọwapụta ụfọdụ ihe omume nwere ike ịpụta, mana oke nke ikpokọta ụtọ na-atọ ụtọ naanị. Nri anụ, mmiri ara ehi, akwa, nri onye anaghị eri anụ ma ọ bụ ngwakọta ngwakọta, "apụl achara" (French - "pomme de terre"; Hibru - תפוח) ה) ma dị mfe ma bụrụkwa ihe ịma aka culinary.
Ngwaahịa dị mkpa bụ poteto, chiiz, soseji, àkwá, pasili, oliv, bọta, akwụkwọ nri na ihe ọ bụla ọzọ na-atọ gị ụtọ.
Na-asa nke ọma ma sie ma ọ bụ sie poteto, na-akpachara anya ịghara ikpo oke. Dabere na ụdị, nha na echiche gị, ị nwere ike ikpebi ihe ị ga-eme. Maka nnukwu poteto, bee na ọkara ma kwochie ọkara ọ bụla. Detụ mmanụ na mmanụ ma ọ bụ mmanụ olive gbazee. Tinye nri na akpọọ nkụ na oven na-agafeghị oke. Nwere ike iji nnukwu oghere dị ka sofa na-akwado mgbe ị na-eje ozi, ma ọ bụ jiri ụfọdụ ihe na-eme ya ma ọ bụ ghee ma ọ bụ ghaa ya n'onwe gị. Ọ bụrụ na ị nwere nduku pere mpe ma chọọ ịkwa akwa, ị nwere ike ikewapụ nkochi ime akwa ahụ. A na-agwakọta protein ahụ na akụkụ ahụ dị mma na ngwaahịa ndị ọzọ, flavored na poteto meatballs na-esiri ya, ma tinye nkochi ime akwa ya na akụkụ bụ isi.
Uzo ozo bu igbutu mkpuchi. Mgbe ị kpụrụ akpụ, ị ga-enweta oghere nduku nke enwere ike ịhazi nchịkọta. N'ụzọ dị otu a, you nwere ike ijere ọtụtụ nri dị ụtọ otu nkwadebe. Ọ bụrụ n’inwe ike iji anụ ma ọ bụ akwụkwọ nri chọrọ ọgwụgwọ ọzọ, ọ ga-adị mma ka ịkwadebe ya tupu oge eruo. Echiche a bụ nhọrọ zuru oke maka iji obere scraps nke ngwaahịa na-ezughi iji jide onwe ya.
echiche, echiche na nduku, nduku, poteto na soseji, nduku na mmanụ, nduku na nri, nduku na nri, nduku na chiiz na akwa, culinary echiche, ọnwụnwa culinary, a culinary ngwọta na nduku, poteto a asara n'ọkụ, poteto, gbazee bọta, Ntụziaka maka nduku poteto, Ntụziaka na nduku, Ezi ntụziaka, kwụrụ na efere, ọgwụgwọ ọkụ, echiche maka ulo, ime ime, arịa ụlọ, n'ime ime, imewe echiche, ụlọ ọgbara ọhụrụ, icho mma, nka nka
Oge Ulo Mmiri
Alaka udara - agba mmiri mara mma! A mara ifuru cherry na-acha aja aja naanị ole na ole…
Echiche ole na ole maka ime ụlọ na nka pụrụ iche. Hapụ echiche gị, chọọ ...
Ihu nooks na crannies
Ndị a bụ ụfọdụ echiche maka nooks mara mma na crannies. Ebe mara mma ịga ...
Echiche dị mfe maka ụta pizza
E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi mee Pizza ma anyị enyela gị ụfọdụ n'ime ha - na fo ...
Ihe ịchọ mma ọdọ mmiri
Ka oge ọkọchị na-erute, a na-atụgharị uche anyị n’izu ike, oke osimiri, ọdọ mmiri. ...
Poppy mkpụrụ wicker "Sinbad Chalmata"
E nwere ọtụtụ ụzọ iji mee achịcha, yana usoro nka nke achịcha achịcha…
Achịcha mkpụrụ vaịn
Achịcha painiapia bụ ihe eji eme achịcha ọdịnala na nke America hụrụ n'anya nke ukwuu. Dịka achịcha achịcha…
Arbor na echiche ubi
Echiche maka gazebo, ebe a na-ahụ ihe ọ andụ andụ na ọdụ n'èzí n'ogige. Y’oburu n’ahia ma obu ju…
Chọọ ebe a na-edebe ihe ochie - Họrọ ọnwa - Mee 2020 Eprel 2020 Machị 2020 Febụwarị 2020 Jenụwarị 2020 Disemba 2019 Nọmba Nọvemba 2019 Ọktoba 2019 Septemba 2019 August 2019 Julaị 2019 June 2019 Mee 2019 Eprel 2019 Machị 2019 Febụwarị 2019 Jenụwarị 2019 Disemba 2018 Ọktoba 2018 Septemba 2018 August 2018 Julaị 2018 June 2018 Mee 2018 Eprel 2018 Machị 2018 Febụwarị 2018 Jenụwarị 2018 Disemba 2017 Nọmba Nọvemba 2017 Ọktoba 2017 Septemba 2017 August 2017 Julaị 2017 June 2017 Mee 2017 Eprel 2017 Machị 2017 Nọmba Nọvemba 2016 Julaị 2016 June 2016 Mee 2016 Eprel 2016 Machị 2016 Jenụwarị 2016 Disemba 2015 Nọmba Nọvemba 2015 Ọktoba 2015 Septemba 2015 August 2015 Julaị 2015 June 2015 Mee 2015 Eprel 2015 Machị 2015 Febụwarị 2015 Jenụwarị 2015 Disemba 2014 Nọmba Nọvemba 2014 Ọktoba 2014 Septemba 2014 August 2014 Julaị 2014 June 2014 Mee 2014 Eprel 2014 Machị 2014 Febụwarị 2014 Jenụwarị 2014 Disemba 2013 Nọmba Nọvemba 2013 Ọktoba 2013 Septemba 2013 August 2013 June 2013 Mee 2013 Eprel 2013 Machị 2013 Febụwarị 2013 Jenụwarị 2013 Disemba 2012 Nọmba Nọvemba 2012 Ọktoba 2012 Septemba 2012 August 2012 Julaị 2012 June 2012 Mee 2012 Eprel 2012 Machị 2012